Radio Don Bosco - Hafatr'i Papa François ho an'ny mpiasa an-dranomasina
Navoitrany tamin’ny hafatra an-tsary nalefany ho azy ireo ny maha-zavadehibe ny asa an-dranomasina sy ny mpanjono noho izy ireo mamatsy ara-tsakafo sy mitondra vokatra hafa ilaina amin’ny fiainana andavanandron’ny olombelona. Hafatra mifono fankaherezana, indrindra amin’izao fotoana hanjakan’ny covid-19 izao. Miantrana am-bava loza ireo mpisehatra amin’ny tontolo an-dranomasina ireo, hoy Papa François, ary enta-mavesatra ho azy ireo ny tsy maintsy hanalavirany ny fianakaviany sy ny tany niaviany ary ny tahotra amin’ny mety hifindran’ny tsimokaretina amin'izao fisian'ny valanaretina izao. Mitondra am-bavaka anareo hatrany aho, hoy iny Papa, nampahatsiahy fa mpanjono avokoa ny mpianatr’i Jesoa. Tsy adinony koa ny nanankina ireo mpiantsehatra amin'ny tontolon'ny ranomasina ireo amin'i Masina Maria Kintan'ny Ranomasina.